NextMapping | Momba ny: Philanthropy
Ao amin'ny NextMapping ™ mijery ny ho avy isika - ny hoavintsika farany dia momba ny zanatsika. Mino fatratra izahay fa ny fanomezana ny ankizy fahaiza-manao 'leadership' dia tsy vitan'ny hanampy azy ireo hivezivezy amin'ny olana ankehitriny fa hahatonga ny ho avin'ny toeram-piasana ho toerana tsara kokoa sy farany an'izao tontolo izao.
Noforoninay ny ankizy afaka mitarika ho toy ny iray aminay fomba hamerenana miverina - manao programa isan-taona ho an'ny ankizy izahay ary miasa amina tetik'asa filan-kevitra mamorona tranokala misy gamified hanampiana ny ankizy hianatra fahaiza-mitarika fototra.
Ny fahitanay: Mamorona hoavy tsara kokoa amin'ny fanomanana ireo mpitarika ho avy… zanaka!
Aoka ho mpanohana
Ny fientanam-po lehibe indrindra ho anay dia ny fiantraikan'ny ankizy manerantany ARY hanome be dia be ho an'ireo fiantrana maro mifantoka amin'ny ankizy izahay. ”
Reg & Cheryl Cran, Mpanorina
Ahoana no fomba fiasa: Ny 4 C an'ny ankizy dia afaka mitarika
Manamboatra vavahadin-tseraseran'ny Ankizy afaka mitondra izahay izay ahafahan'ny ankizy sy ny ray aman-dreniny na ny mpampianatra miditra ao amin'ny fahaizana mitarika ho an'ny ankizy. Miara-miasa amin'ny vondrona ankizy mitovy hevitra isika hanampiana ny ankizy ho mpitarika mpitarika vonona ho anay.
Ny fahatokisan-tena dia miorina amin'ny fahatokisan-tena mahasalama, manampy ny ankizy hanangana ny fahatokisany amin'ny tenany izy ireo izay manampy azy ireo handray fanapahan-kevitra tsara ary mamaha olana famoronana.
Mampianatra isika fa ny fananana herimpo dia mitovy amin'ny 'hery super' manana ny fahaizana hiteny ho an'ny tenany, ny mijanona ho mahatoky amin'ny tenany ary ny fomba hijoroany tsara.
Izahay dia manampy ny ankizy hahafantatra ny maha-zava-dehibe ny fiteny, fikasana ary teny ary ny fiantraikan'izy ireo amin'ny fomba tsapany momba ny tenany ary koa ny teny nofantenany mba hisy fiantraikany amin'ny hafa.
Izahay manampy ny ankizy hahita fa ny toetran'ny fananganana dia singa manan-danja amin'ny maha-mpitarika azy. Ny toetran'ny fananganana dia ahitana ny fanaovana izay mety rehefa tsy misy olona mijery sy misafidy ny hieritreritra miaraka amin'ny eritreritra 'amiko to'.
Moa ve ianao aingam-panahy handray anjara amin'ity tetik'asa mahavariana ity?
Mifandraisa aminay mba hahitana ny fomba!